5–10CM White Saudi Arabian Embroidered Hat
Arabian yakashongedzwa chena ngowani, chena, goridhe, sirivheri inogona kugadzirwa, saizi yevakuru: 54-58CM, vana: 50-53CM, inzwa zvakanaka, akasiyana emarudzi mapatani, ngowani iyi inodiwa nevarume vechiMuslim, ndiyo nzvimbo yangu Top sales yekambani.
Aya akanyanya kugadzikana akadzika-mbiri edehenya hat akarukwa bhinzi akakodzera kupfeka kwegore rose, uye ndinodada nazvo. Isu tinogara tichivandudza kusanganiswa kwemavara!
Super comfortable-White Saudi Arabia Embroidered Hat yakarukwa kubva pamhando yepamusoro yakarukwa donje ine nyoro kubata. Yakanyatsokodzera kune ese mabvudzi, kusanganisira misoro yemhanza. Kroche yedu yekotoni inobatsira kutora unyoro muzhizha uye kuchengetedza kupisa munguva yechando.
Yakanakisa helmet lining-Yedu yakaderera mbiri dhizaini iri pamusoro kwenzeve, ichiita kuti ive yakanaka sengowani yekumisikidza midhudhudhu, mabhasikoro uye ngowani dzemitambo. Hazvina mhosva kuti imhando ipi yehelmeti yaunotamba kana kukwira, unogona kuwedzera tambo yekunyaradza nekudzivirira.
Kugutsikana-Isu tinotarisa pamhando yepamusoro bhinzi, hati nemakepisi, ayo akanyatsokodzera zvipfeko zvemazuva ese kana zvakanyanya zvekunze zviitiko. Iwe uchanzwa mutsauko pakati pezvinhu zvedu zvemhando yepamusoro uye zvimiro. Join zviuru zvevatengi vanogutsikana.
Tinoedza nepatinogona napo kutsanangura zvigadzirwa zvedu zvese zvakajeka pasina kuvanza chero kukanganisa uye kukuvadza. Isu tinogadzirawo akawanda emhando yepamusoro mifananidzo sezvinobvira kupa vatengi vedu mazano ari nani tisati tatenga. Saka ndokumbira utarise zvakanaka mifananidzo uye tsananguro. ndokutenda zvikuru
Kugadzirwa kwacho kwakanaka, girovhosi rinokwana, uye kana waripfeka, rinowedzera chimwe chinhu chechiremera kumusoro kwemusoro wako. Pasina mhosva!
Zvakapfuura: Ruvara Kombuta Yakashongedzwa YechiMuslim Kunamata Hat
Zvinotevera: Nylon Mesh Muslim Chemical Fiber Hat
Hat Yakarukwa yeArabia
Mens Mosque Hats, Ciput Hijab, Best Muslim Cap, Hijab Dupatta, Wool Kufi, Muslim Cap Black,